भारत - - मुक्त छोराछोरीको विश्वकोश
स्वागत छ । छ, भारतीय केटी गरेको सानो बहिनी र एक उत्कृष्ट स्थान (भूमि को विचार), भारत, मा एक देश छ दक्षिण एशिया । त्यहाँ भन्दा बढी एक अर्ब मान्छे, त्यसैले हजारौं लाखौं. मात्र छ चीन अधिक बासिन्दाहरूलाई । देश लगभग दस पटक रूपमा ठूलो जर्मनी र अक्सर भनिन्छ एक»एशिया»: एक भाग को एक महाद्वीप,»उप-महाद्वीप». भारत मा, धेरै मानिसहरू विभिन्न संग आफ्नै भाषा र संस्कृति छ । यो छ एक देशमा धेरै देवता र धर्मले. पछि भारत लगभग भएको छ वर्ष को एक बस्ती ग्रेट ब्रिटेन, यो स्वतन्त्र भए. धेरै करोडौं वर्ष पहिले, आज भारत थियो एक ठूलो द्वीप र अन्ततः धक्का विरुद्ध एशियाली महाद्वीप छ ।, हिमालय. यो भन्दा को सारा को उत्तर भारत । मा भारतीय को भाग हिमालय केही. देखि हिमालय महत्त्वपूर्ण नदीको देश को प्रवाह, साथै गंगा. उहाँले छ त्यहाँ कृषि लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ गर्न सकिन्छ तर सधैं त्यहाँ छ एक धेरै देशमा । भारत मा तपाईं पाउनुहुनेछ विभिन्न बोट र जनावरहरू, किनभने देश यति धेरै फरक परिदृश्य, सबै संग एक निजी जलवायु: हिमालय मा, यो छ चिसो आर्कटिक मा रूपमा, त्यहाँ छ, उष्णदेशीय वर्षा वन, तर पनि मरुभूमि हो । ठूलो, चिरपरिचित जनावरहरू भारत को हो एशियाली हात्ती, बाघ र गैंडा. पहिले नै मा स्टोन आयु, मान्छे को भारत मा छ बस्थे । सबैभन्दा लामो समय को लागि त्यहाँ थियो भारत मा विभिन्न राज्य अमेरिका, तर पनि एक ठूलो साम्राज्य, वर्ष पहिले, साम्राज्य को मरियम, र मध्य युग मा, को साम्राज्य. थिए मुस्लिम र शासन उत्तरी भारत । यो समय मा, केही अरबी शब्द आयो भारतीय भाषा, र धेरै भारतीय भए मुस्लिम. को अन्त मा मध्य युग, को पोर्चुगिज आए वास्को दा गामा भारत छ । पुगेको ब्रिटिश सैनिक भारत: बेलायत जितेको अधिक र अधिक. केही भागहरु मा ब्रिटिश स्व-शासन, अन्य अधीनमा भारतीय राजकुमार गर्ने साथ ब्रिटिश. यदि यो आए विद्रोह थियो रूपमा ब्रिटिश, यो क्रूर छ । लागि बेलायत, भारत महत्त्वपूर्ण थियो किनभने यो धेरै मिल्यो कच्चा माल छ । उदाहरण को मसला र चिया र कफी, जो छन् त युरोप मा लोकप्रिय छ । वर्ष मा, भारत थियो अन्तमा. तर, बीच तुरुन्तै आए लड्न मुस्लिम र अन्य भारतीय । त्यसैले, दुई देशहरू भारत, जहाँ मुख्यतः मुस्लिम बस्थे: पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान अलग, पछि बंगलादेश. मामला मा, को विभाजन को भारत, धेरै मानिसहरू हत्या गरिएको छ वा कदम थियो. मिति गर्न, त्यहाँ छ, हिंसा छ भने एक भाग को भारत अब हौं गर्न चाहनुहुन्छ गर्न भारत । भारत मा धेरै मान्छे बाँच्न मा सानो देशमा । एक चौथाई तिनीहरूलाई बस्न शहर । तिनीहरूलाई केही छन् विशाल शहर जस्तै मुम्बई, सबै भन्दा ठूलो शहर मा भारत । त्यहाँ मानिसहरू लाखौं छन्, दुई पटक धेरै रूपमा सम्पूर्ण अस्ट्रिया. केही भारतीय धेरै धनी छन्, एक जिल्ला, विशेष गरी गरिब छ । केहि विशेष बारेमा भारत, मामला छ । एक जाति एक ठूलो समूह छ, मान्छे को एक भाग को समाज । जसले पट्टी गर्न एक»महत्वपूर्ण»जाति. तर आउन भने तपाईं एक परिवार पट्टी गर्न एक कम जाति, तपाईं अवहेलना, गरिब, र शायद एक वास्तविक व्यक्ति हो । तपाईं मात्र विवाह गर्न कसैले आफ्नै जाति पनि जात छ, जो गर्न अनुमति छ, एक काम को लागि. राज्य खोजे को मामला उठाउन् गर्न, तर यो मात्र हासिल गर्न सकिन्छ बिस्तारै । को चार-पाँचौ, भारतीय छन् हिन्दुस्तान. तिनीहरूले विश्वास निश्चित देवता, र छैन कम से कम को सबै देवता छन् कि आफ्नो क्षेत्र मा वा आफ्नो गाउँमा महत्त्वपूर्ण छ । ठाँउ मा धर्म इस्लाम: किनभने भारत त थुप्रै बासिन्दाहरूले कि बाँच्न मात्र इन्डोनेसिया र पाकिस्तान बढी मुस्लिम भारत मा भन्दा. तुलना मा, मात्र केही भारतीय, तापनि बुद्ध मा जन्म भएको थियो, भारत । भारत मा हामी बोल्न भन्दा बढी भाषाहरू.
यो भाषा को एक टाढा नातेदार छ जर्मन छ । अन्य भाषा, विशेष गरी दक्षिण मा, बारी मा, एकदम फरक छन् । सरकार भारत को प्रयोग दुई भाषा: हिन्दी र अंग्रेजी । विगतमा, तर यो फाइदा छ कि यो छ छैन एक भारतीय भाषा हो । ती भारतीय छैन जो बोल्न हिन्दी, गर्न चाहनुहुन्छ । मा अमेरिका यो छ जो निर्णय भाषा आधिकारिक भाषाहरू को संघीय राज्य । भने एक गरिब देश भएको छ, स्वतन्त्र लिया छ मा सामान्यतया एक हिंसात्मक शासक । छैन त भारत मा. लाखौं भारतीय अनुमति गर्न छनौट । असंख्य छन् दल, केही ज्ञात देश भर, तिनीहरूलाई अधिकांश छन् तर मात्र एक एकल राज्य वा एक क्षेत्र । भारतीय छनौट हरेक पाँच वर्ष को भाग रूपमा आफ्नो संसद, कमन्स को घर छ । अन्य भाग, को घर, एक प्रकारको संघीय परिषद: को प्रतिनिधिहरु संघीय अमेरिका । सँगै, दुई भागहरु गर्न निर्णय बारे नियमहरू. संसद दिन सरकार र गणतन्त्र को अध्यक्ष, को टाउको को राज्य । संघीय अमेरिका हो जस्तै कुरा ल्यान्डर मा जर्मनी र अस्ट्रिया. संघीय राज्य हुन सक्छ धेरै निर्धारण आफूलाई लागि. उहाँले संसद र सरकार छ, तर कुनै अध्यक्ष, तर एक राज्यपाल । को को नियुक्त भारतीय राज्य राष्ट्रपति. छन् किनभने, यति धेरै सानो दल, यो त सजिलो छैन शासन गर्न भारत । पनि: भारत मा, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जो परिवार को एक राजनीतिज्ञलाई छ । पहिलो टाउको को भारत को सरकार साँच्चै थियो नेहरू. उहाँलाई आफ्नो छोरी, इंदिरा गांधी पछि लागे । पछि, उनको छोरा राजीव गरेको सरकार थियो बस । भारत मा, अधिक फिलिमहरु गरे भन्दा हलिउड. किनभने तिनीहरूले आउन मुख्यतः, अब भनिन्छ मुम्बई, यो भनिन्छ»बलिउड». मा बलिउड चलचित्रमा यो अक्सर एक को कुरा प्रेम, गायन र नृत्य. दर्शक पर्छ, तर गर्न सक्षम हुन, अझै पनि बस्न, किनभने एक चलचित्र लागि रहन्छ तीन घण्टा. प्रत्येक वर्ष, अधिक फिलिमहरु गरे यस्तो फिलिमहरु मा भाषा.
धेरै उत्तर भारत, एक क्षेत्र भनिन्छ कश्मीर
धेरै वर्ष को लागि भारत र पाकिस्तान भन्दा लडिरहेका गर्ने यो हौं गर्नुपर्छ । भारत शासन दक्षिण, पाकिस्तान उत्तर-पश्चिम क्षेत्र को छ । कश्मीरी, कश्मीरी बाख्रा, जसको ऊन छ को एक विशेष राम्रो कपडा ह्यान्डल गर्न सक्छन्. आधा भन्दा बढी भारतीय छन् किसान । के तिनीहरूले बढ्न रूपमा, जूट र चिनी छ. अक्सर प्रक्रियामा देखि भारतीय कारखानों छ । मा विशाल प्रणाली भनिन्छ, वृक्षारोपण, बढ्न, कफी, चिया र कपास हो । यो भन्दा बेचे छ विदेश । अन्य फारमहरु धेरै सानो हो, किसान बाँच्न सक्छ देखि आफ्नो काम छ । मा नदी र विशेष गरी समुद्र मा एक धेरै माछा पक्रेको छ । भारत, देश देखि धेरै मसला छ । धेरै भारतीय छन्, तर कुनै पैसा छ । सबैभन्दा खान सानो वा कुनै मासु: एक हात मा, किनभने यो महंगा छ, तपाईं को लागि अर्कोतर्फ, विश्वास किनभने तपाईं तपाईं मनाही छ । एक हिन्दु खान सक्दैन गाई छ । तर, भारत मा धेरै धेरै गाई र पानी भैंसी प्रदान दूध र रूपमा काम ड्राफ्ट जनावरहरू । त्यसैले कसरी बढ्न युरोप, विशेष गरी अनाज र खाने, चामल जस्तै भारत मा. भारत मा पनि छन्, बहुमूल्य सामाग्री, माटो मा जस्तै तेल, कोइला, र धातु.
तपाईं अब धेरै को मिसिन र स्टील
थुप्रै टुक्रा वस्त्र लगाउने हामी युरोप मा, बुना छन् भारतीय मिल्स.
सफ्टवेयर कम्प्युटर आउछ अधिक र अधिक
यो छ कसरी एक भारतीय केटी बच्चाहरु को लागि र विद्यार्थीहरूको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् बताए बस तस्वीर संग, र राम्रो प्रस्तुतिको लागि स्कूल मा छ ।
← मा एक व्यवस्थित विवाह, म कसरी सुनिश्चित गर्न एक राम्रो पहिलो छाप अघि म पूरा केटी र उनको परिवार । भारतीय भिडियो डेटिङ
तपाईं कसरी क्रिसमस →